आज यस महत्वपूर्ण भेलामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख महामहिम सोङ ताओसंग दुई देशका सत्तारुढ दल– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अंगालेको विचार र विचारधाराका बारेमा आफ्नो विचार राख्न पाउँदा मलाई औधी खुशी लागेको छ । यस अवसरमा, एकहप्ता पछि मनाईने चीनको ७० औं राष्ट्रिय दिवसको बधाई ज्ञापन गर्दछु । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनका महामहिम राष्ट्रपति कमरेड सि चिन फिङले गर्नुभएको ‘बर्ष २०२० सम्ममा चीनको ग्रामिण भूभागका बासिन्दालाई हालको गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउने’ प्रतिवद्धता पूरा होस् र चीनले देखेको समाजवादी सपना शीघ्र पुरा होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु ।
हाम्रा दुई पार्टीहरु बीच आज विचारधारात्मक (आइडोलोजिकल) प्रश्न र विचारधारा (थट) का बारेमा जुन उचाइबाट छलफल प्रारम्भ भएको छ, यसले मलाई अत्यन्त खुशी र उत्साहित बनाएको छ । दुई पार्टी बीच बढ्दो घनिष्ठतासंगै हामीले देखेको समृद्धिका सपना, हामीले बोकेको विचार र त्यसको सिर्जनात्मक प्रयोगका सकारात्मक परिणाम र सामना गर्नु परेको चुनौति बारे अनुभव आदान–प्रदान हुनु एकदमै स्वभाविक र सान्दर्भिक रहेको म ठान्दछु ।
छिमेकीको हिसाबले, चीन र नेपाल परापूर्व कालदेखि कै घनिष्ठ मित्रहरु हुन् । हामी अग्ला हिमाल र हिमाली नदीहरुबाट जोडिएका छौं । प्रकृतिले हाम्रा सिमानामा खडा रहेको हिमाल र बगी रहेको हिमनदीले हाम्रा सम्बन्ध पनि हिमाल जत्ति कै उच्च र कञ्चन छ, बेगवान गतिमा बगी रहने हिमाली नदी जस्तै स्वच्छ र अविच्छिन्न छ भन्ने बताई रहेको छ।
हाम्रो मित्रता खुल्ला छ, स्वतन्त्र छ र अटल छ । हामी एक अर्काको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दछौं । एक अर्काको हितहरु र सम्वेदनशीलताको ख्याल गर्दछौं । राष्ट्रिय स्वाभिमानको कदर गर्दछौं । तर हाम्रो मित्रता स्वार्थहरुको लेनदेन भन्दा धेरैमाथि सम्मान, साथ र सहयोगमा उठेको छ ।
हाम्रा दुई देशबीच समस्या रहित सम्बन्ध छ । हामीले हाम्रो मित्रतालाई पारस्परिक लाभ र सहयोगी भावनाको आधारमा अघि बढाइ रहेका छौं । समय क्रममा अघि बढ्दा आइपर्ने विषयहरुलाई मैत्रीपूर्ण आपसी सम्वादको माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्छौं ।
हामी एक चीन नीतिमा सँधै स्पष्ट र दृढ छौं । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका विरुद्ध हामी, हाम्रो भूमिको प्रयोग हुन दिंदैनौं।
कुनैपनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप, कुनै पनि बहानामा किन नहोस्, हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । हामी चीनको आन्तरिक मामिलामा पनि कुनैपनि बहानामा बाह्य चलखेल हुनुहुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौं ।
कुनैपनि देशको शान्ति सुब्यवस्था र अमनचैन खलबल्याउन, स्थायित्वमा समस्या ल्याउन, सामाजिक एकतालाई बिथोल्न वा विकास प्रयासका गतिमा ब्यबधान खडा गर्न बाहिरबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कसैले पनि, कुनैपनि अवस्था र बहानामा हात हाल्नु उचित हुनै सक्तैन ।
मुलुकहरु बलियो हुँदा कहिले कहिँ अनपेक्षित रुपमा दम्भ बढ्छ र तिनीहरुबाट असहज गतिबिधि हुने गर्छ । तर, चीन शक्तिशाली देश भैकन पनि यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा नलाग्नु विश्व राजनीतिक इतिहासमा नयाँ परिदृष्य हो । यस ब्यबहारबाट चीनले अङ्गालेको राजनीतिक प्रणालीसंग अरु राजनीतिक प्रणालीको भिन्नता र श्रेष्ठतालाई स्पष्ट पारेको छ। चीन न्यायोचित विश्व व्यवस्था, शान्ति, समानता, सह–अस्तित्व एवं भविष्य तर्फ उन्मुख सहयोगात्मक अग्रसरतामा विश्वास गर्छ भन्ने कुरा यस व्यवहारबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उन्नाइसौं राष्ट्रिय कँग्रेसमा पार्टीका महासचिव कमरेड सि चिन फिङद्वारा अघि सारिएको ‘टुवार्ड अ प्mयुचर अफ सेयर्ड प्रस्पेरिटी’ अबधारणा र चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ले यस कुरालाई अझ स्पष्ट पारेको छ ।
क्रान्तिको नेतृत्व गरेरमात्र होइन समृद्धि हासिल गर्ने जनताको चिरकालदेखिको सपना पूर्ण गरेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आप्mनो गौरवमय इतिहास रचेको छ । विकास र सुशासनको मामिला चिनियाँ प्रगति र दृढसंकल्प वास्तवमै प्रेरणादायी छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुले क्रान्तिको नेतृत्व त गर्न सक्छन् तर विकासको गर्न सक्दैनन् भन्ने बुर्जुवा शक्तिको प्रचारलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले झूटो साबित गरिदिएको छ ।
तर यस अवस्थासम्म आईपुग्न स्थापनाको समयदेखि हालसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै एक शताव्दी लामो, उतार÷चडावपूर्ण यात्रा तय गरेको छ । यदी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हुँदैन थियो भने क्रान्तिपूर्वको २८ बर्ष लामो कठिन क्रान्तिकाल र जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना पछिको ७ दशक भित्रै चिनियाँ समाजको रुपान्तरणमा आजको अभूतपूर्व उपलब्धि संभव हुने थिएन ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको समयमा चिनियाँ विशेषतासंग मिल्दो अनुशरण गर्न मिल्ने देश वा आन्दोलनहरु समेत थिएनन् । जे जस्तो नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने थियो, ती सबै आप्mनो अनुभव र क्षमता कै आधारमा गर्नुपर्ने थियो । त्यही बाध्यता र चिनियाँ नेतृत्वको सिर्जनशीलताले ‘माओ विचारधारा’ जन्मायो, जुन चिनियाँ क्रान्तिको लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्रै बनेन, संघर्षरत विभिन्न मुलुकहरुका आन्दोलनकालागि पनि प्रेरणा बन्न पुग्यो ।
माक्र्सवादको रक्षा र प्रवद्र्धनमा सिर्जनात्मक प्रयोगको मामिलामा पनि चिनियाँ अनुभव अब्बल रहँदै आयो । म स्मरण गर्छु– पार्टी इतिहासमा मूख्य मोडहरुको चर्चा गर्दा चिनियाँ मित्रहरू अक्सर तीन प्रमुख विचारधारात्मक मोडहरुबारे चर्चा गर्ने गर्नुहुन्छः
सातौँ राष्ट्रिय महाधिवशेनद्वारा माओ–त्से–तुङ विचारधाराको स्वीकृति, जसले चीनमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक र नवीन प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।
कमरेड माओको निधनपछि सिर्जना भएको अन्यौललाई चिर्दै कमरेड तङ स्याओ पिङद्वारा प्रतिपादित खुलापन र आधुनिकीकरणको नीति, जसले चीनमा विकासको नयाँ युगको प्रादुर्भाव ग¥यो ।
र, चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद तथा नयाँ युगका लागि सि चिन फिङ विचारधारा ।
निःसन्देह अहिलेको समयमा सबै प्रगति र उपलब्धिहरुको श्रेय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवं महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङलाई जान्छ । उहाँको सही र गतिशिल नेतृत्व एवं चीनको आन्तरिक तथा विश्व व्यवस्था सम्बन्धि उहाँका सुल्झिएका, समानुकुल र गतिशिल सोचहरुको श्रृङ्खलाले एउटा विचार प्रणाली (स्कूल अफ थट)को आकार ग्रहण गरेका छन् । जसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सि चिन फिङ विचारधारा’को नाम र दर्जा दिएको छ ।
आर्थिक–सामाजिक विकासका अनेक क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेर मित्रराष्ट्र चीनले विभिन्न मानक कायम गरी विश्वलाई नै चकित तुल्याई दिएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको विकास र सफलताको मार्ग वास्तवमा चीनको विकास र सफलताको मार्गले निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा अब धेरैमा भ्रम रहेन । त्यसैल,े चिनियाँ मोडेलको विकास दिगो र सफल हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यस मोडेलमा संकटहरु कम प्रकट हुने र देखा परेका चुनौतिहरु सामना गर्न सकिने कुरामा पनि विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने यो विकास, आप्mनै मौलिक जगबाट उठेको, आप्mनै बुद्धि, पसिना एवं प्रयासमा हुर्किएको र व्यापकतालाई अङ्गालेको हुन्छ । यो मोडेल र यस मोडेलले अङ्गालेको अबको जमानाको विकास मोडेल, औपनिवेशिक जमानाको जस्तो उपनिवेशका श्रोतमाथि कब्जा जमाएर तिनका पसीनामा सवार भएर हासिल गरिएको कृत्रिम विकास र वैभव हैन । चीन अहिले विश्वको–
दोश्रो ठूलो अर्थव्यवस्था,
औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश,
वैदेशिक मुद्रा सञ्चय गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश,
ब्यापारिक मालवस्तु निर्यात गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश,
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी गर्ने विश्वको दोश्रो ठूलो देश,
विकासका लागि वित्त व्यवस्था गर्ने विश्वकै अगुवा मुलुक,
र, विश्वको आर्थिक वृद्धि र सम्मृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मुख्य देश हो ।
नेपाल चीनसँग विकास साझेदारी गर्न चाहन्छ । आपसी अन्तरनिर्भरतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित गरी दुवै देशबीच लाभकारी सहकार्य स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो साझा निष्कर्ष हो । चीनको घनिष्ठ र नजिकको छिमेकी भएका नाताले आर्थिक–सामाजिक तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रमा चीनले गरेको चौतर्फि र तीब्र प्रगतिबाट नेपाली जनता अत्यन्तै खुशी छन् ।
नेपालले हालसालैका वर्षमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धि हासिल गरेको छ । द्वन्द्व र अस्थिरतामा रुमल्लिएर लामो अबधि व्यतीत गरेपश्चात् नेपाल प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सफल भएको छ ।
आउने हप्ता तपाईहरुले धुमधामसंग मनाउने राष्ट्रिय दिवस जस्तै तीन दिन अघि हामीले पनि भव्य रुपमा राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनायौं । सात दशक लामो अनवरत संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरी नेपाली जनतालाई साँचो अर्थमा सार्वभौम नागरिकका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको दिन– संविधान जारी भएको दिनलाई हामीले संबिधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन थालेका हौं ।
विचारधारात्मक सिर्जनात्मकताका हाम्रा आ–आफ्नै तर समान प्रकृतिका अनुभव तथा ऐतिहासिक मोडहरू छन् । सन् १९७० को दशकको झापा विद्रोहले टुक्रा–टुक्रामा विभाजित तत्कालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन र पुनर्जीवित गर्न नयाँ गोरेटो पहिल्यायो । तत्कालिन नेकपा (एमाले)का महासचिव जननेता कमरेड मदन भण्डारीको उदय तथा उहाँले प्रतिपादित गर्नु भएको नौलो सिर्जनात्मक सिद्धान्त– जनताको बहुदलीय जनवादले सन् १९९० मा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको निराशालाई चिर्न मार्गदर्शन ग¥यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएकै बर्ष स्थापित भएको थियो । अनेक टुक्रामा विभाजित नेकपालाई, स्वरुपको हिसावले सन् १९४९ कै अवस्थामा र शक्तिको हिसाबले त्योबेलाको भन्दा कैयौं गुना बलियो, देश कै बलशाली पार्टीको रुपमा एकीकरण गर्ने काम करिब डेढ बर्ष अघि सम्पन्न भयो । त्यो एकीकरण प्रकृया , सन् १९७० कै दशकमा निर्मित नेकपाको अर्को बलियो भङ्गालो तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालिन नेकपा (एमाले) बीचको ऐतिहासिक एकतापछि सम्पन्न भयो ।
चीनको तुलनामा हाम्रा आप्mना केही भिन्न विशेषताहरु छन् । हामीले माक्र्सवादलाई हाम्रा आफ्नै अनुपम र विशिष्ट आवश्यकता र चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी स्थानीयकरण गरेका छौँ, तदनुरूपको साँचोमा ढालेका छौँ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता कुराहरू समाविष्ट भएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ । जनतासँग आफूलाई निरन्तर रूपमा जोडिराख्ने तन्तुहरू गुमाएको कुनै पनि राजनीतिक दलले सामाजिक उन्नति थेग्न वा त्यसका लागि योगदान गर्न सक्दैन । आमजनताको अटुट साथ र समर्थनले मात्र राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक रूपान्तरण गर्न र सुशासन प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकीकरण पछि जनताको जनवाद नेकपाको सिद्धान्त हो । ‘जनता’ शब्द हाम्रो जनवादको वर्गीय सार हो । प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलीयता हाम्रो शासन प्रणालीको रुप हो ।
नेपाली समाजको विविधतायुक्त सामाजिक सांस्कृतिक जगमा आधारित विशिष्टतालाई समुचित सम्बोधन गर्न हामीले यस प्रकारको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेका हौँ । हामी विविधता र बहुलताको सम्मान गर्दछौँ र माक्र्सवादले जोड दिने मूल आधारहरूप्रति समेत उत्तिकै कृतसंकल्पित छौँ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका प्रकाश देखाउने मसालवाहकको झैँ अनुपम र विशिष्ट हुने गर्दछ । यसले कैयौँ मुलुकहरूमा क्रान्तिको नेतृत्व गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अगुवाइ गरेको छ । त्यसो हुँदा, समृद्धि र सुशासनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । हामीलाई लाग्दछ – त्यस्तो भूमिका प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत् गर्न सकिन्छ ।
तर कम्युनिस्ट पार्टी अनुशासित र एकताबद्ध हुनै पर्छ । कुनैपनि बहाना या नाममा अराजकता, गुटवाजी र विखण्डन सही र स्वीकार्य हुनै सक्दैन । पार्टीले अङ्गिकार गरेको विचार जति राम्रा भएपनि त्यस्ता प्रवृत्तिहरुले ती राम्रा विचारलाई समाप्त बनाउँछ ।
गत बर्ष भएको मित्र राष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणको बेला मैले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कूल, बेइजिङमा सम्बोधन गर्ने मौका पाएको थिएँ । उक्त अवसरमा मैले हामीले अपनाएका केही सारभूत सिद्धान्तहरू निम्नानुसार रहेको उल्लेख गरेको थिएँ ।
१) हाम्रा मूल क्रान्तिकारी भावना र आदर्शहरू ओइलाउन नदिन हामीले समुचित बन्दोबस्त गरेका छौँ । दलीय राजनीतिमा प्राप्त सफलताले कार्यकर्ता पंक्तिमा आउन सक्ने आत्मतुष्टिमा रमाउने प्रवृत्ति तथा पार्टीका असल उद्देश्यबाट विचलित हुनसक्ने खतराप्रति हामी सचेत छौँ। कमरेड माओले भनेझैँ “शत्रुले परास्त गर्न नसकेका सहयोद्धाहरू विलास, अकर्मण्यता, भ्रष्ट आचरण तथा आत्मप्रसंशा जस्ता मीठा गोलीले ढल्न सक्छन् ।” म विश्वस्त छु– नेपाली तथा चिनियाँ दुवै देशका समाजवादी प्रारूपले यस कुरालाई बुझेका छन् ।
२) पूँजीवाद निर्देशित सामाजिक उन्नतिको कथन मार्फत पूँजीवाद र बुर्जुवा संस्कृतिबाट हाम्रो आन्दोलन पथभ्रंश हुनसक्दछ भन्ने तथ्यप्रति हामी सचेत छौँ । हामीले के देखेका छौँ भने समाजको उपल्लो तहलाई समृद्ध बनाए पनि, नवउदारवादले केही व्यक्तिको वर्ग रूपान्तरण गरे पनि, अन्ततः पूँजीवादले न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण र जनकेन्द्रित विकास सहितको समाज स्थापना गर्न सक्दैन । जनताले अनुभूत गर्नसक्ने असली प्रगति समाजवादमा मात्र सम्भव छ ।
३) पार्टीका मूल सिद्धान्त, आदर्श तथा दृष्टिकोणसँग अविचलित राखिराख्न पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिलाई निरन्तर प्रशिक्षित, अभिमुखीकरण र मार्गदर्शन गरिराख्ने काम गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो ध्यान युवापुस्तामा केन्द्रित हुनुपर्दछ, जसमा बल, ऊर्जा र सिर्जनात्मक शक्ति प्रचुर हुन्छ । तथापि, आक्रामक रूपले फैलिरहेको विश्व पूँजीवादको प्रभावले युवा समूहमा व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद तथा सामाजिक दायित्वबाट विमुख हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तसर्थ, क्रान्तिमा परिपक्व भएका लामो अनुभवी पुस्ता र ऊर्जाशील युवापुस्ताबीचको खाडल पुर्न हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
४) माक्र्सवादको रक्षा, प्रवद्र्धन तथा सिर्जनात्मक प्रयोग गर्नु पर्दछ । नवीन विचार तथा सोचप्रति हामी सदैव खुल्ला रहनुपर्दछ । नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मकताको विकास हुने यसरी नै हो ।
राजनीतिक दलले अनुकरण गर्नैपर्ने कुनै खास सूत्र हुँदैन । जतिसुकै सुन्दर भएपनि नक्कल, नक्कलै हो, त्यसो गर्नु हुँदैन । त्यो दिगो पनि रहन्न, अर्काको अनुकरणबाट सफलतामा पुग्नै सकिन्न ।
माक्र्सवाद सफल त्यतिखेर मात्रै हुन्छ, जब त्यसलाई हरेक देशले आफ्नै मौलिक परिस्थिति अनुरुप प्रयोग गरेको हुन्छ । चीनले आप्mनै ढाँचाको समाजवादी मोडेल प्रस्तुत गरेको छ । हामीले परिवर्तन र विकासको आफ्नै परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरुपको नितान्त आफ्नै मोडेल अपनाएका छौं । यसरी हाम्रा दुई पार्टीहरु “जुत्ताको नापमा खुट्टा काट्ने” हैन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै आ–आफ्ना मुलुकको धरातलीय यथार्थताको आधारमा सिर्जनात्मक तरीकाले माक्र्सवादको प्रयोग र विकासमा समर्पित छन् ।
Statement by PM Oli at the Remote Inauguration of the Integrated Check Post, Biratnagar
Statement by the Rt. Hon’ble Prime Minister Mr. K P Sharma Oli during the Ceremony of Joint Remote Inauguration by the Prime Ministers of Nepal and India of the Integrated Check Post, Biratnagar and the post-earthquake reconstruction of private housing projects in Gorkha and Nuwakot Districts, Kathmandu, 21 January 2020…
Address by PM Oli at the Inauguration of Fifth UNI Apro Regional Conference
Just transition for Workers in the Digitalized Workplace in the Global Economy Address by Prime Minister Rt. Honourable K P Sharma Oli at the Inauguration of Fifth UNI Apro Regional Conference Kathmandu, 20 November 2019 Mr. Chairperson, Eminent personalities from the future of decent work, Distinguished delegates, Ladies and Gentlemen,…
Statement by PM Oli on 18th Summit of NAM
“Upholding the Bandung Principles to Ensure Concerted and Adequate Response to the Challenges of Contemporary World” Statement by Right Honourable Mr. K P Sharma Oli, Prime Minister of Nepal and Leader of the Nepali delegation to the 18th Summit of Non-Aligned Movement (NAM) Baku, Azerbaijan, 25-26 October 2019 Your Excellency…